I-Apple TV 4K entsha, iMac kunye nePad Pro ziya kufumaneka ekupheleni kukaMeyi | Ndisuka mac
Ngamanye amaxesha asiqondi ukuba olu lwazi, amarhe kunye nokuvuza kuvela phi. UJon Prosser owaziwayo, Ilumkisa ukuba inkampani yaseCupertino iceba ukumilisela imodeli entsha ye-Apple TV 21K ebekwe ngokusesikweni ngoLwesibini, nge-Epreli 4, nge-20 kaMeyi.
La Ukuhlaziywa kweApple TV 4K Ngezinye izinto ezintsha ezinje ngeSiri Remote kwaye iprosesa yayilindelwe ngabasebenzisi. Kuyinyani ukuba ayisiyonto yokulungisa inkulu kakhulu kodwa singatsho ukuba bahlaziye i-Apple TV 4K nge-A12 Bionic chip, ehambelana ne-HDR nabanye.
Nguwo I-tweet ikhutshwe nguProsser omdala kwaye inxulumene nomhla wokufika kwabasebenzisi bemodeli entsha ye-Apple TV 4K:
Ukuqaliswa kwe-iPad Pro ngoMeyi 21.
Umhla "wama-22" endiwukhankanyileyo unxulunyaniswe nemodeli ye-5G yenethiwekhi ethile kwaye kufuneka ingakhathalelwa ubukhulu becala.
U-Apple uzokwazisa i-Apple TV entsha nge-21 kaMeyi. https://t.co/A31ZulKGWa
-UJon Prosser (@jon_prosser) Aprili 29, 2021
Kubonakala ngathi iimodeli ze-iMac ezingama-24 intshi kunye nePad Pro entsha eboniswe ngo-Epreli 20 iza kufika nangale mihla, ngoMeyi 21 ozayo. Kushiyeke okungaphantsi komhla omncinci kude kufike ukubhukisha kwezi modeli zintsha zeMac, iPad Pro kunye neApple TV 4k evulekileyo, ke kungekudala sizakushiya amathandabuzo. Ngokwenyani sicinga ukuba ixesha elimisiweyo lide kakhulu ukuba zithunyelwe kodwa siza kubona ukuba kwenzeka ntoni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Intsha ye-Apple TV 4K, iMac kunye nePad Pro ziya kufumaneka ekupheleni kukaMeyi